आश्विन ४, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता ,
संविधान भन्नासाथ मुलुकको मुल कानून भन्ने कुरा बुझ्न आम सर्वसाधारणलाई खासै गाह्रो छैन ।
मुलुक भित्र विद्यमान सबै नियम, कानून, नीति, ऐनभन्दा माथि संविधान हुन्छ भन्ने कुरा नेपालमा त झन जन–जनले बुझिसकेका छन् । चालु संविधान जारी हुने दिन २०७२ असोज ३ गते पूर्व यो संविधानको मस्यौदा निर्माणका क्रममा र मस्यौदा बनेपछि पनि जनस्तरबाट समेत सुझाव संकलन गरिएको अवस्थामा नेपालीलाई संविधानको कुरा अरु मुलुकका जनतालाईभन्दा बढि जानकारी छ नै ।
धर्म मान्ने मानिसलाई पाप र धर्मको कुरा गर्ना साथ जति पापबाट मानिस पछि हटी धर्मको नैतिकतामा बाँधिन्छ, त्यति नै नियम मान्ने मानिसलाई पनि संविधानका कुराले त्योभन्दा कम बाँध्दैन । अझ कलियुगीन वर्तमानमा मानिसलाई धर्मका कुरालेभन्दा नियम कानून र संविधानका कुराले बढि बाध्ने गरेको छ । मानिसलाई पापको कुरा गर्दा धर्म मान्दिन मतलब छैन भन्न थालेपछि उसलाई नैतिकताको बाटोमा हिडाउन नियम, कानून र संविधानभन्दा अर्को विकल्प छैन । यो कुरा हरेकलाई प्रष्ट पनि भइरहेको छ । पूर्णरुपले आफ्नो इच्छा अनुसारको नभए पनि संविधान मान्दिन भन्न सर्वसाधारणलाई त छुट छँदै छैन । मुलुकको विद्यमान कानून हरेकले मान्नु पर्छ नै । पूर्व राजावादीले त यो संविधानलाई मानिरहेको अवस्थामा गणतन्त्र पक्षधर आम सर्वसाधारण र राजनीतिक दलहरुले संविधान मान्नु पर्छ भनी कसैलाई सम्झाउने कुरा खासै युक्तिसंगत छैन । स्वयम्ले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । संविधान मान्ने हो भने यसको दिवस मनाउँदिन भन्नुको के तुक ?
फेरि मुलुकको मूल प्रवाहमा रजाईं गर्ने राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीले त संविधान मान्दिन भन्ने छुट छैन । संविधानमा चित्त नबुझेका कुरा प्रकृयागत तरिकाले उनीहरुले नै संशोधन गर्ने हो । अब जनताले गएर संशोधन गरिदिने होइन । अनि यो भएन उ भएन भनी जनताको अगाडी कुर्लनुको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अर्थ छैन । फेरि संविधानलाई नै टेकेर सत्ताको रजाई तिनै राजनीतिक दलहरुबाट भइरहेको अवस्थामा उनीहरुले संविधान सर्व स्वीकार्यताका लागि दिवस मनाउँदिन भन्न सुहाउने कुरा नै भएन । संविधानको आधारमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले नै सपथ खाएर विभिन्न पद र पावरको उपभोग गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले त झन संविधान दिवस मनाउने र आम सर्वसाधारणलाई समेत सिकाउने गर्नुपर्ने हो । साच्चै संविधान नमान्ने हो भने त्यो संविधानले प्रदद्ध गरेका अधिकारका दाएरामा छिरी बुझेको तलब भत्ता र सबै सुविधा एकमुष्ट फिर्ता गर्न सक्ने ल्याकत देखाउन सक्नु पर्छ । संविधानलाई टेकेर एक रुपैया फाइदा नलिएका सर्वसाधारणले नेपालका राजनीतिक दलहरुले प्रतिपादन गरेको संविधान मानिदिनु पर्ने । अनि संविधान भित्र छिरी मोज गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहितका दलहरुलाई संविधानको तेजोबध गरी दिवस नै मनाउँदिन भन्न मिल्छ ?
उसो भए उनीहरुले त्यहि संविधान भित्र रहेर प्रतिपादन गरेका नियम कानून नेपाली जनताले किन मानिदिनु पर्ने ? प्रदेश २ का जनताले त झन प्रदेश सरकारले ल्याएका कुनै कुरा नमान्नेभन्दा छुट हुन्छ त ? दलका नेता कार्यकर्ताले लादेको शासन प्रशासन भोली नमान्दै जाँन थाले मुलुक फेरि कता जान्छ ? कुनै कुराको विरोध र समर्थन गर्दा दूरगामी सोचका साथ गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुले नसकेको कारण नै मुलुक संघीय गणतन्त्रमा पुग्दा समेत उस्ताको उस्तै छ ।
#संविधान दिवस #नेपालका दल #राजनीतिक दल
सोमवार, आश्विन ४, २०७८, ०५:०९:००
कार्तिक १, २०७८ मध्य नेपाल संवाददाता , कविता खड्का